Handina Makwikwi | Martech Zone
Muvhuro, Mbudzi 16, 2009 Svondo, November 3, 2013 Douglas Karr
Ini ndoziva izvo zvinoita sekuzvikudza. Handireve saizvozvo. Chero nguva chero munhu paakataura nezvemakwikwi pane imwe kambani yandaishanda, ndaiseka. Ndinogara ndiinazvo. Mumwe munhu akandiudza kamwe kuti hazvigoneke kutarisa kumashure kwako uyezve uchimhanya kumberi nekumhanya kwepamusoro. Ini ndinotenda kutya kunoremadza makambani.
Ndinotenda mazviri co-opetition.
Ini handisi kukurudzira vasingatarisi makwikwi ako… kambani yese inofanirwa kunzwisisa zvakanakira izvo zvinounza patafura Zvinonyanya kukosha kupfuura makwikwi ako emakwikwi, zvakadaro, ndeyekuti kana paine mutambo pakati pezvakanaka izvi ne zvinodikanwa chaizvo zvemutengi. Ndiri kukura bhizinesi rangu kubva pakutanga izvozvi uye mumazuva ekutanga ndakatora pabasa rese randaigona kungoona kuti ndinogona kuramba ndichifamba. Tichifunga nezvemashure, ichocho chaisava chisarudzo chakanaka… ndingadai ndakadoma mazhinji emapurojekiti uye vatengi vangadai vakafarawo, pamwe vachifara.
Ini tarisiro yangu ikozvino kugadzira kudyidzana nemasangano makuru, mafambisirwo ehukama neruzhinji, uye kuenderera mberi nekuwedzera hukama hwandinayo nevatengi vakakura kwazvo. Vhiki rino, ndakaendesa tarisiro mbiri dzakanaka kune yangu makwikwi. Icho chaive chinhu chakakodzera kuita. Ini handikwanise kupa hukama ihwohwo nehungwaru hwavanokodzera uye handina zviwanikwa zvekusimbisa kubudirira kwavo… saka sei ndingaisa mukurumbira wangu pairi?
Muno muIndipolis, kune boka rakakura revanhu vane tarenda vanogona kupa zvakafanana masevhisi andinopa. Makambani akafanana ExactTarget, Right Pane Inopindirana, Kuwedzera, uye akati wandei dhizaini yewebhu uye ekuvandudza masangano ane zvigadzirwa nemasevhisi andinogona kupa… asi ini handidi. Vane mari yekudyara, zvivakwa, rutsigiro rwevatengi uye zviwanikwa zvandisina. Izvo zviri nani kumutengi.
Padivi reSocial Media, kune vashoma vedu mudhorobha… vese vandinotenda kuti ishamwari dzangu. Sezvatinoenda kune mamwe emakambani makuru mudhorobha, mumwe nemumwe wedu anounza maonero ake patafura. Ini handina basa nekukwikwidzana navo padanho iri. Zvekare, ndiri kunyanya kunetsekana kuti kambani inowana iyo rudyi zviwanikwa. Kana ndikavarevera uye chiri kubudirira, tese tinokunda. Ini ndinotaridzika zvakanaka kuvataurira, makwikwi angu anowana bhizinesi, uye ini ndichawana wekutanga kufona pane unotevera mukana, futi.
Munguva pfupi yapfuura, (hombe) kambani yemuno yakandipa runaround yekundimanikidza kuti ndivape mamwe emahara masevhisi kwavari. Ini ndaingovaendesa kune wandaishanda naye akatanga atarisa neni. Pakadzoserwa shure, vakadzokera kwandiri ndikavaudza kuti ndakanga ndisingafarire.
Kune rimwe divi, kune vashoma vamiririri mutaundi izvo zvino vanodada vanopfeka monikers yekutsvaga injini optimization kana zvemagariro enhau hunyanzvi. Kunyangwe ivo vasina kuwedzera chero munhu kuvashandi vavo nehunyanzvi uhu, uye havana kana kuva nemhedzisiro nevatengi munzvimbo idzi, ivo vanoramba vachibvuta kumakambani ari kutsvaga iwo masevhisi. Ivo mukana, vachipa yese sevhisi iyo chero munhu ane hanya nekubvunza nezvayo. Handifarire zvavari kuita uye ndinotaura ndichipesana navo kakawanda sezvinobvira.
Kana iwe uchitsvaga Search Engine Optimization mupi, tsvaga uye iwe uchawana ari kuhwina kutsvaga. Zviri nyore kudaro. Kana iwe uchitsvaga a social media nyanzvi, enda kune zvimwe zviitiko zvematunhu, tarisa kuti ndiani akatanga mabudiriro enharaunda, uye ona kuti ndiani anotevera kukuru. Zvichabuda pachena kuti ndiani ane hunyanzvi uye ndiani asina. Ivo mukana vanosiya nzira yemisodzi.
Handitende kuti ndine makwikwi. Rangu basa ndere kuona kana ndiri kukodzera marwadzo ane kambani. Kana ndisiri akagwinya, ndiri kuenda kumberi. Ndicho chikonzero zvibatanidzwa zvangu zviri kukura, ndiri kuwana yakawanda nguva yekushanda pazvinhu zvandinofarira, vatengi vangu vari kuona mhedzisiro yavanoda, uye ndinofara… uye ndichiri kutyora;).
Unofungei? Uno kwazvo mune makwikwi?
Tags: bhizimisihukama hwebhizinesico-opetitionmakwikwicoopetitionKugonesa Kugonesa
Flat-Musoro Masiki uye Kamikazes
Nov 17, 2009 pa2: 48AM
Zvakanaka iwe basa nderekuona kuti makambani anoda kuita bhizinesi newe anogovera zvinangwa zvako uye hunhu kuti ushande pamwe chete. Asi zvinofadza kuziva kuti wapedza kuumburuka nekuita chero chinhu icho mumwe nemumwe mutengi anokukumbira kuti uite nekuda kwekuti ivo vabvunza.
Nov 17, 2009 pa3: 17AM
Pfungwa, ndapedza Mat. Ndichine zvimwe zvasara zvekubata, zvakadaro. 🙂
Nov 17, 2009 pa2: 53AM
"Mumwe munhu akandiudza kamwechete kuti hazviite kutarisa kumashure kwako uye uchimhanya kumberi nespidhi yepamusoro."
Ini ndinobvuma zvachose! Munguva pfupi yadarika isu takave nemakambani maviri ayo anopa akafanana masevhisi kufona uye kunyepedzera kunge vanofarira kushandisa masevhisi edu. Vakanga vakajeka, vachitoenda kusvika pakutipa zita remumwe munhu akavataurira. Saka ivo pavakanga vachizadza mafomu pawebhusaiti yedu, vachifona nekusiya voicemail meseji, nekutitumira tsamba kune rumwe ruzivo isu tanga tiri kunze tichitaura nevanotarisira vatengi. Vangadai vakapedza nguva yavo zvirinani kutaura kune tarisiro uye nekupa rakakura basa revatengi.
Kana zviri zvevamwe, neniwo ndinobvumirana. Ziva zvaunogona. kugona uye zviwanikwa. Gadzira hukama hunobatsira pamwe neavo vakakukomberedza. Wese munhu anokunda ipapo.
Nov 17, 2009 pa3: 05AM
Yakanaka post, Doug. Ndinobvuma nomoyo wese.
Zvinonakidza kucherechedza kushandurwa kwekutanga kwechiLatin kwemakwikwi kuri, "Kuti tishande pamwe chete kuti zvinhu zvive nani." Pfungwa yevakundi nevanokundwa yakaunzwa neveFrance muzana ramakore rechi16. Siya iwo Matatya, eh?
Nov 17, 2009 pa3: 18AM
Anotyisa quote, Amy! Handina kumboziva kuti… mukomana tinoshandisa zita iri zvisirizvo muno muUS!
Mbudzi 17, 2009 na5: 24 PM
Ini ndinobvumirana zvachose newe kuti vanhu vazhinji vanobatira vanopa pamwe nezvinangwa zvavo zveSEO vari kuyedza kuwana masevhisi emahara. Kutenda nemisoro kumusoro.
Mbudzi 17, 2009 na6: 49 PM
Ini handigoni kubvumirana neizvi zvakare. Ini ndinofunga nzira yakawandisa nguva inoshandiswa mukutarisa uye kunetseka nezvevanokwikwidza. Kunyanya mumisika ine simba seyemagariro midhiya uye SEO, izvo zviri kukura nekukurumidza, pane yakawanda nzvimbo yemakwikwi, uye uri mukana wakanyanya kufa nekuti hauna kuenderana zvakanaka nevatengi pane nekuti vako vanokwikwidza vari kudya masikati ako .
Mbudzi 17, 2009 na10: 03 PM
Doug - sezvakamboita, ndinoda maitiro ako. Ini ndagara ndiri wepfungwa kuti kana zvasvika pakutumirwa vs. kuita bhizinesi iwe, chero bedzi mutengi achizoguma achifara, vanozoyeuka kuti WAKAvafadza, kunyangwe zvichingova nekutumira. Kufamba kwakanaka sekurova, handiti?
Uyezve, makambani mazhinji anokoshesa kukoshesa kwese divi rekuvimbika rekuziva kuti vari kukumbira chimwe chinhu chausingakwanise kana chausingafanire kuedza kupa uye kuva akatendeseka nezvazvo. Kana iyo kambani isingakoshese izvozvo uye ichingofunga nezvekuchengetedza bhuru, saka iwe haudi ivo kune mutengi zvakadaro, handiti? Zviri nyore kutaura uye kuomarara kuteedzera mune yazvino hupfumi mamiriro, asi achiri mazwi ekurarama ne… kana angangoita mazwi ekuendesa na.
Mbudzi 17, 2009 na11: 20 PM
Doug, ndinotenda kana iwe ukapedza yako yakakosha nguva uchinetsekana nezviri kuitwa nemakwikwi iwe uri: Kuve unofambira mberi uye kusaita zvine chekuita nekwakapoteredza ndiko musimboti webudiriro.
Nov 21, 2009 pa3: 33AM
Doug - Yakakura posvo! Ndinoyeuka pakutanga kwebasa rangu kushandisa mazwi echiuto nevazhinji mukambani: hondo, kurwa, zano, matekiniki, zvichingodaro. Isu takanga tichinetseka zvakanyanya pamusoro pezviri kuitwa nemamwe makambani. Nekambani yangu, handigoni kunetseka nezvevamwe vakomana. Tinofanirwa kutarisa kuendesa zvakanakisa zvigadzirwa nemasevhisi atinogona kune vedu vatengi. Dzimwe nguva isu takasiya "mikana"; dzimwe nguva takazvipfuudza kune mumwe munhu. Pane zvakawanda zvekutenderera, mumaonero angu, chero bedzi isu tichitarisa pane kukosha kwatinounza patafura.
Jun 5, 2012 pa1: 51AM
Ini ndinoda huzivi hwako hwekuisa zvinodiwa nevatengi
kutanga sezvo ini ndiri fan hombe yekupa yakasarudzika vatengi. Ndiri kuda kuziva
kana makambani auri kutumira vatengi kwavari ari kudzorera nyasha kana
vanowana mutengi wavasaenderane naye. Iwe unowana akawanda mareferenzi kubva kwavari
kana iwe unongotenda mune yakanaka karma yekubatsira zvechokwadi mutengi?